WARARKA – Shabakadda Wararka Amiirnuur
Shabakadda Wararka Amiirnuur
Xog Xaqiiqda Ku Saleysan Monday, August 21, 2017
Muxaadaro : Furaha Liibaanta, Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil.
Waxaan idiin soo gudbinaynaa Muxaadaro uu Cinwaankeedu yahay ” Furaha Liibaanta” waxaana jeedinaya Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun.
Sawirro : Dadkii Shacabka ahaa Ee Mareykanku uu ku laayay Jubbada dhexe.
Waa Sawirro muujinaya dadkii Shacabka ahaa ee habeenkii xalay ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay ku xasuuqeen Tuulada ” Axmed Yare” ee duleedka degmada Jilib ee Wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka.
Maamulka Farmaajo : ” Waan ka warqabnaa Duqeyntii Duleedka Jilib”.
Maamulka Villa Soomaaliya ayaa sheegay inay ka warqabaan duqeyn habeenkii xalay ahaa ka dhacday duleedka degmada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe. Bayaan kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta ee Maamulka Dowladda Fedraalka ayaa lagu sheegay in Hogaamiyaha Maamulkaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu amray duqeyntaasi. “Ciidamadeenu waxay dileen toddoba ka tirsan xoogagga Al-Shabaab […]
Dowladda Hindiya oo Dib u celineysa Qaxooti Muslimiin ah.
Dowladda Wadanka Hindiya ayaa sheegtay inay dooneyso inay dib u celiso ku dhawaad 40 kun oo ka tirsan Qaxootiga kasoo jeeda Muslimiinta Rohingiya oo ku nool dalkaasi. Wasiiru dowladaha arrimaha gudaha ee Dowladda Hindiya Keereen Riijiijo ayaa Baarlamaanka u sheegay in dowladda dhexe ay ku amartay Maamulayaasha gobollada inay soo […]
Saraakiil iyo Askar lagu dilay Weerar ka dhacay Gobolka Laamu.
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar khasaara badan lagu gaarsiiyay ciidamada booliska Kenya oo ka dhacay deegaan kala qeybiya gobollada Gaarisa iyo Laamu. Weerarka oo ahaa mid jidgal ah ayay dagaalyahanno Katirsan Xarakada Al Shabaab waxay u dhigeen askar iyo saraakiil katirsan Booliska oo kasoo amba baxay gobolka Lamu […]
18 Qofood oo lagu dilay Weerar ka dhacay Borkino Faso. – Video
Weerar lagu qaaday Maqaayad ay ka cunteeyaan dalxiisayaasha reer galbeedka oo ku taalla magaalada Wagadugu ee dalka Borkina Faso ayaa sababay dhimashada 17 qofood iyo dhaawaca tiro intaas ka badan.’Preview Changes (opens in a new window) Sarkaal ka tirsan Ciidamada Meliteriga ee Borkina Faso ayaa sheegay ” in dhimashadu ay […]
Sawirro : Ciidamada Xabashida oo dad ku laayay duleedka Garbahaarey.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ee gumeysiga ku jooga qeybo ka tirsan dalka Soomaaliya ayaa xasuuq ka geystay Gobolka Gedo. Wararka laga helayo duleedka degmada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo waxay sheegayaan in Ciidamada Xabashida ay Afar qofood ku dileen deegaanka ” Meykaa-reebey” ee duleedka degmadaasi. Dadka la laayay ayaa ahaa dad […]
Mucaaradka Kenya : 100 dibadbaxayaal ah ayaa la dilay. [ Video]
Axzaabta Mucaaradka ee Dalka Kenya ayaa ku eedeeyay Ciidamada Bileyska ee dalkaasi inay dileen inkabadan boqol qofood oo ka tirsan taageerayaasha Mucaaradka, kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay dhigayay dibadbaxyo ay ku diidan yihiin Natiijada doorashada ee la shaaciyay. Jhonson Mothana oo ka tirsan Xisbiga Mucaaradka ee ugu weyn dalka Kenya […]
Bandow lagu soo rogay Gobolka Virginia kadib banaan baxyo dhimasho sababay. – Video
Seddax qofood ayaa dhintay kadib markii dibadbaxyo iska soo horjeedo ay ka dhaceen magaalada Charlottesville ee Gobolka Virginia ee Dalka Mareykanka. Dad kasoo jeeda qowmiyadaha Caddaanka ah ee ku nool gobolkaas ayaa dhigayay dibadbaxyo ka dhanka ah soogalootiga iyo dadka Jinsiyadaha kale kasoo jeeda ee ku nool Mareykanka, balse waxay […]
Weerar ka dhacay Gobolka Gedo iyo Saraakiil lagu dilay Diinsoor.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa barqanimadii saakay waxay weerar dhabbagal ah ay u dhigeen kolonyo Ciidamo Itoobiyaan ah oo marayay qeybo ka tirsan Gobolka Gedo ee Koonfurta galbeed ee Soomaaliya. Wararu waxay sheegayaan in weerarka kamiinka ah inuu ka dhacay waddada u dhaxeysa degmooyinka Garbahaarey iyo Luuq, iyagoona goobtaas uu […]
Copyright © 2017 Shabakadda Wararka Amiirnuur. Designed by WPZOOM